श्रीमती/प्रेमीकालाई उत्तेजक पार्न सक्नुभएन? त्यसो हो भने यि १० कुरा - Namaste Times
मंगलबार, चैत्र ०५, २०७५ | Thursday, December 7, 2017
श्रीमती/प्रेमीकालाई उत्तेजक पार्न सक्नुभएन? त्यसो हो भने यि १० कुरा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४ समय: १८:१३:३६
५. आँखाको परेलाः आँखाको परेला पनि महिलाहरूला कामोत्तेजित गर्न सहयोगी हुन्छ । परेलामा प्रेमपूर्व चुम्बन उत्तेजित गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । परेलाको छाला पातलो हुन्छ र कैयन् उत्तेजक तत्वको उपस्थितिले त्यसलाई संवेदनशील बनाउँछ । ६. पाइतालाः प्रायः गरी मानिसहरू यो भागलाई बेवास्ता गर्छन्, तर आश्चर्यजनक रूपले यो कामोत्तेजक अंगमध्येको एक हो । यो स्थान नर्व एन्डिङबाट भरिपूर्ण हुन्छ । फलस्वरूप यो भाग अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । पाइतालाको स्पर्श मात्रले पनि महिलाहरूमा कामोत्तेजना जागृत गर्छ ।